abcnepali | » सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज, प्राथमिकतामा के–के ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज, प्राथमिकतामा के–के ? – abcnepali
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज, प्राथमिकतामा के–के ?
काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार अपराह्न ४ बजेपछि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको आधार मानिन्छ । यसकै आधारमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट निर्माण गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएपछि त्यसबारे छलफल हुनेछ । संघीय संसद् सचिवालयले बढीमा ३ दिनसम्म यसबारे छलफल चलाउने तयारी गरेको छ ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपछि त्यसको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।अनलाईन खबरबाट